Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A January 2011 (4)
Q and A January 2011 (4)
1. ဝက်ခြံ ဘယ်လို ကုရမလဲ
2. ကိုယ်ဝန်တားဆေး တစ်လကို တစ်ကြိမ်ထိုးခိုင်းပါတယ်
3. ဗိုက်နာပြီးလိင်တံ အထဲပြန်ဝင်တာ ဘာရောဂါလဲ
4. ဘောကျတယ် ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ
5. ခြေသလုံး ကြွက်တက်တတ်တယ်
6. ဘာကြောင့် အကြောပြတ်ရသလဲ
7. သူ့မှာ ပွေးပေါက်နေလို့
8. Viagra ဆေးက ရန်ကုန်မှာ ဝယ်လို့ရနိုင်ပါသလား
9. တစ်ရက်ကို ဝမ်းဘယ်နှခါသွားခြင်းဟာ
15 Jan 11, 20:17
Q 1: ဝက်ခြံ ဘယ်လို ကုရမလဲကို ကျေးဇူးပြုပြီး မေးပို့ပေးပါ။
“Acne ဝက်ခြံ ရောင်စုံ” ကို ဖတ်ပါ။
15 Jan 11, 16:52
Q 2: ကျွန်တော်ချစ်သူပါ သားအိမ်မှာ မိန်းကလေးများ ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထရှိတဲ့ အလုံးတည်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကို ခွဲထုတ်ပြီးတော့ ခွဲတဲ့ ဆရာဝန်က နောက်ထပ်အဲ့ဒီလို မဖြစ်အောင် ကိုယ်ဝန်တားဆေး တစ်လကို တစ်ကြိမ်ထိုးခိုင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန် ရာသီဆင်းချိန်မှာ ဆင်းနေပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုး လုပ်ဆောင်ရပါမလဲ။
ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာကို သဘောမပေါက်ပါ။ ရာသီပုံမှန်ဆင်းတာ ကောင်းတာဘဲ မဟုတ်လား။ ခွဲရတဲ့ ရောဂါနာမယ် အတိအကျ သိပါသလား။ အခု ဘာခံစားနေရသလဲ။
Q 3: ယောက်ျား ဘောကျတယ် ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရလဲ။ ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲ။ “Hernia အူကျခြင်း” ကို ဖတ်ပါ။ ဒီမှာ မတင်ရသေးဘူးလား မသိပါ။ တင်လိုက်ပါမယ်။
Q 4: လူနာတစ်ယောက် က ဗိုက်နာပြီးလိင်တံ အထဲပြန်ဝင်တာ ဘာရောဂါလဲ။ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရသလဲ။ “အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၃၆) Penile retraction တိုနာ ရောဂါ” ကို ဖတ်ပါ။ ဒီမှာ မတင်ရသေးဘူးလား မသိပါ။ တင်လိုက်ပါမယ်။
Q 5: မကြာခဏ ခြေသလုံး ကြွက်တက်တတ်တယ်။ ပြီးတော့ တစ်ချိန်လုံး ခြေဖျားလက်ဖျား အေးနေတယ်။
ဘာကြောင့်လဲ။ “Cramps ကြွက်တက်ခြင်း” ကို ဖတ်ပါ။ ဒီမှာ မတင်ရသေးဘူးလား မသိပါ။ တင်လိုက်ပါမယ်။
Q 6: ဘာကြောင့် ဒူးနောက်၊ ပေါင်၊ လက်မောင်းတွေမှာ အကြောပြတ်ရသလဲ။ “Stretch Marks အကြောပြတ်ခြင်း” ကို ဖတ်ပါ။ ဒီမှာ မတင်ရသေးဘူးလား မသိပါ။ တင်လိုက်ပါမယ်။
Q 7: ကျမမောင်အငယ်က (့) ထောင်မှာ (၅)နှစ် အကျဉ်းကျနေပါတယ်။ သူ့မှာ ပွေးပေါက်နေလို့ ဘာဆေးသောက်၊ လိမ်းရင် ကောင်းမလဲလို့ မိသားစုက ကျမကို လှမ်းမေးတယ်။ ပွေးပေါက်တာ အတော်ကြာပြီလို့ ဆိုတယ်။ လုံးဝ အရှင်း ပျောက်သွားအောင် ဘာဆေးတွေလိမ်းရ၊ သောက်ရမလဲဆိုတာလေး ညွှန်းပါအုံးရှင့်။
Grisofulvin 250 mg Tablet မနက် ၁ လုံး ညနေ ၁ လုံး၊ ဖြစ်တာ ကြာရင်ကြာသလို ကြာကြာသောက်ရမယ်။ ၂-၃-၄ ပါတ်။ လိပ်းဆေး Ring Guard လိမ်းနိုင်တယ်။ နဲတဲ့သူ လိမ်းဆေး တမျိုးထဲရတယ်။ များရင် ၂ မျိုးလုပ်ပါ။
Blue Star Ointment for Fungus, Aloe Vesta Antifungal Ointment, Loprox, Spectazole and Oxistat နာမယ်တွေ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ဆေးကိုဖတ်ရင် clotrimazole, tioconazole, econazole and miconazole တမျိုးမျိုးပါတာဆိုရင် ရတယ်။
15 Jan 11, 23:06
Q 8: Viagra ဆေးက ရန်ကုန်မှာ ဝယ်လို့ရနိုင်ပါသလား။ Veetab နဲ့ Erectra -100 ဆိုတဲ့ ဆေးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ အဲသည်ဆေးတွေကရော ဘယ်လိုမျိုး side effect တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ။
Erectra-100 ကိုမသိပါ။ ရန်ကုန်အခြေအနေလဲ မသိပါ။ Sorry! ထိုင်း-အိန္ဒိယ-တရုတ် နယ်စပ်တွေကို ဥဒဟို သွားလာ နေကြတာမို့ မှာလို့-ဝယ်လို့ ရမှာပါ။
Veetab ကတော့ အမေရိကားမှာ မရဘဲ မြန်မာပြည်မှာ ရတဲ့ Sildenafil ဆေးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Sildenafil citrate ကို Viagra, Revatio နာမည်တွေနဲ့လဲ ရောင်းတယ်။ Veetab and Kamagra အကြောင်း FDA သတိပေးချက်မှာ ဒီလို ရေးထားပါတယ်။
• Phosphodiesterase inhibitor ဆေးပါတဲ့ Erectile dysfunction လိင်အင်္ဂါသန်စေတဲ့ဆေး ဖြစ်တယ်။
• ကလေးတွေနဲ့ အမျိုးသမီးများ မသောက်ရ။
• Erythromycin ပဋိဇီဝဆေး၊ Ketoconazole, Itraconazole ပွေး-မှိုဆေးတွေနဲ့ တွဲရင် သွေးထဲ ဆေးပိုများစေမယ်။
• Isosorbide Mononitrate - Isosorbide Mononitrate ဆိုတဲ့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအတွက်ဆေးတွေနဲ့ တွဲမသောက်ရ။
• ၁ နာရီ ကြိုသောက်ရင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်တယ်။
• တနေ့ ၁ ခါထက် ပိုမသောက်ရ။
15 Jan 11, 02:52
Q 9: လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ရက်ကို ဝမ်းဘယ်နှခါသွားခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပါသလဲ။
အတိအကျ မရှိပါ။ ၁ ခါ၊ ၂ ခါ၊ ၃ ခါ၊ ပုံမှန်ဖြစ်သူများတယ်။ ကိုယ့်အကျင့်နဲ့ကိုယ် ရှိနေတာကောင်းပါတယ်။ အချိန်ရော၊ အကြိမ်ရော။